Odayaashii Al-Shabaab Aaday oo Loo Diiday In ay ku Laabtaan Beled Xaawo – GEELLE MAG
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Beled Xaawo ayaa sheegaya in Odayaashii soo xulay Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay u yeereen ururka Al-Shabaab kadibna ajiibay yeerista hadana aaday, ayaa waxaa la sheegayaa in loo diiday in ay ku laabtaan Deegaannada ay Dowladda Federaal ah ee Soomaaliya ka arimiso, ee ay markii hore ka tageen.
19 Oday oo ka tegay Magaalada Beled Xaawo lana soo kulmay ururka Al-Shabaab ayaa Maamulka Magaaladaasi waxa ay u diideen in ay Magaaladaasi dib ugu soo noqdaan ama ay u soo galaaan Magaalada Beled Xaawo oo ay Dowladdu Maamusho.
Diiriye Salaad Raage oo ka mid ah Odayaashii u tagay ururka Al-Shabaab kana mid ah Odayaashii Ajiibay amarka ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in loo diiday in ay dib ugu oo laabtaan Magaalada Beled Xaawo.
“Wax Digniin ah oo ay noo sheegeen ama wax yeerid ah oo ay noo sheegeen in aanan meeshaas aadin ma ay jirto.” ayuu yiri Diiriye Salaad oo la hadlayey Warbaahinta.
“Haddii aanay naga warqabin oo dad laga kala tegay aan noqonay oo qofba habeen la qabsanaayo oo la iska gowracaayo aan noqonay in ay na dhibaateeyaan un miyey xaq u leeyihiin.” ayuu yiri Diiriye Salaad Raage.
Culayskan soo food saaray Odayaal Dhaqameedyadii soo xulay Xildhibaanada ayaa u muuqda laba daran mid dooro, halka weli ay waajibaadkooda ka mid tahay Xulista Xildhibaanada heer Federaal iyo heer Maamul Goboleedba.
Axmed Madoobe oo la Kulmay Xildhibaannada Cusub ee Jubbaland